Manamboatra sy toro-hevitra amin'ny FSX cfg settings
fanontaniana Manamboatra sy toro-hevitra amin'ny FSX cfg settings
1 taona 3 volana lasa izay #973 by DRCW
Ho an'ny sombin-tsakafo vaovao dia nametraka fiovana sasany aho izay mety hahatonga ny fisidinanao ho bebe kokoa hatrany (Graphics wise). Ny voalohany
Ny ampahany dia hanome anao ny famaha fototra ilaina ao amin'ny FSX. Raha manana FSX Steam Edition ianao dia tsy mila manao ity fizarana voalohany ity.
(Ireo fikendahana ireo dia natao ho an'ny rafitra manana quad core na CPU tsara kokoa ary minitra fohy 4 RAM na tsara kokoa)
Amin'ny teny hafa, rafitra maoderina kokoa.
Fizarana voalohany: fanovana sy ilaina ilaina
Voalohany dia ilaintsika ny miditra amin'ny main FSX config file ( Ataovy azo antoka fa nametraka varavarankely ianao mba hampisehoana rakitsary sy lahatahiry miafina )
Mifidiana Start / Computer / C: / Users / Ny anaranao na ny anaran'ny solosaina / Appdata / Roaming / Microsoft / FSX
Rehefa manokatra ny lahatahiry FSX ianao dia jereo ny fsx.cfg Didy ary manokatra izany ho anao kahie. Tokony hiseho toy izao izany:
MISAINA = 1
InfoBrakesEnable = Marina
InfoParkingBrakesEnable = Marina
InfoPauseEnable = Marina
InfoSlewEnable = Marina
InfoStallEnable = Marina
InfoOverspeedEnable = Marina
WideViewAspect = Marina
User Objects = Fiaramanidina, Helikoptera
SimObjectPaths.0 = SimObjects \_ fiaramanidina
SimObjectPaths.3 = SimObjects \_ sambo
SimObjectPaths.4 = SimObjects \_ Biby
Fanalehibiazana = 1
LOHATENY = 1,4
SelectAircraftManufacturer = rehetra
SelectAircraftPublisher = rehetra
SelectAircraftType = rehetra
Fepetra = 0
UnlimitedFuel = diso
TrueAirspeed = Marina
AutoCoord = Marina
RealMixture = diso
StressDamage = Marina
GEffect = Marina
ManualLights = diso
GyroDrift = diso
CrashWithDyn = diso
CrashDetection = Marina
AutoTrim = diso
AllowEngineDamage = diso
FANJAKANA = Idaho
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_06_turbulence amin'ny.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_08_fiafarana.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_19_an final.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_20_taxi mankany amin'ny vavahady.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
Hanomboka eo amin'ny fizotran'ny fampisehoana izahay. Raha mampiasa LCD Monitor ianao na fampiroboroboana, dia te hanova ity manaraka ity ao amin'ny [Sarintany].
WideViewAspect = diso
Manaova diso amin'ny marina
Any amin'ny farany ambany indrindra [GRAPHICS] dia ampio ireto manaraka ireto:
Ny HIGHMEMFIX = 1 no tena manan-danja indrindra amin'ny famelana ny FSX hampiasa ny 4 gig amin'ny VAS (Virtual Address Space) raha toa ka mampiasa lozisialy sy fiaramanidina fanampiny ianao
autogen ary ny hafainganina mafy havanana. Ity rindran-dàlana fanampiny ao amin'ny rakitra fikirakao ity dia hanampy amin'ny fisorohana ny OOM ( avy amin'ny fahadisoan'ny tsiambaratelo ) Izay mahazatra ao amin'ny FSX. The Steam
Ny fanontana dia efa ahitana ity fanovana ity ho anao amin'ny alalana.
Manoro hevitra anao ihany koa aho ny mandefa Process Explorer at www.sysinternals.com . Ity fitaovana ity dia hanampy anao hanara-maso sy hahatakatra ny fampiasana VAS mandritra ny sidina
Izany dia azonao jerena hoe ahoana no ahafahan'ny FSX mitantana ny loharanon'ny rafitrao. Io dia aseho amin'ny fomba tsotra fotsiny VS ( habaka virtoaly ) Ho hitanao koa ny fampiasana CPU sy RAM.
Ny fahatakarana ity dingana ity dia hanampy anao hanangana FSX ho an'ny sidina lavitr'andro, nefa tsy mahatsapa izany ny OOM mitranga aorian'ny ora fiaramanidina 10 amin'ny dingana farany.
Isika rehetra dia tokony haniry mafy hahita ny 64 bit version of flight simulator fa hatramin'izao dia 4 gigs de VAS no tsara indrindra hatao.
Ankoatra ny b] GRAPHICS [/ b Ny fizarana dia ity andalana manaraka ity:
Miova ho 2048 na 4096
Amin'ny alàlan'ny FSX dia napetraka ho 1024 ho fenitra izay tsy Definitions ambony. Tsy afaka mankafy HD graphics ianao amin'ny fomba fijerinao maso toy izany. Fiaramanidina sasantsasany
Ny download (payware) dia tsy mampiseho ny mety raha tsy manana an'io andalana io ny 4096. Indray mandeha ny Steam Edition dia efa navadika ho 4096 raha alahatra. Ianao dia afaka
koa manandrama 2048 izay mbola HD. Hiankina aminao ny fps (sary isaky ny faharoa) Fanamarihana: Raha manova ny fikandranao ianao (Sliders) ao amin'ny FSX dia mila averinao amin'ity rohy iray ity ianao
satria hiverina amin'ny default 1024.
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia fitsipika ankapobeny. Tokony hanomboka FSX ianao aorian'ny famoahana ny fanovana 3 etsy ambony ary hazakazaka sidina fohy eo amin'ny faritra iray tianao haleha. Fantatro fa hahatsikaritra ianao
Fizarana 2: Fihetseham-pandrefesana maloton'ny ala.
Manoro hevitra aho isaky ny misy fanovana manaraka ataonao FSX raha toa ka manana olana amin'ny fps ianao afaka manidy ny programa ary mamerina indray ny andalana mankany amin'ny default. Tena marina izany
dia miankina amin'ny rafitra ataonao FSX eo. Manana processeur 8 Core miaraka amin'ny karatra 2 avo HD aho izay mihazakazaka ao amin'ny firewire sy ny 16 gigs an'ny RAM performance.
Ity manaraka ity dia ao www.simforums.com/forums/new-twea...25507.html
Tweak #1 - Fiatrehana fifadian-kanina
Mba hampihenana io antony io, dia namerina nandinika ny fomba nandraisan'ny Flight Simulator X scheduler ny andraikitra fototra ao amin'ny FSX. Amin'izao fotoana bebe kokoa CPU izao
natokana amin'ny famindrana angona tahiry, anisan'izany ny tontolon'ny fitrandrahana, amin'ny fandaniana kely ny tahan'ny rindran-damina. Araka ny hevitro, ity fanovana ity dia namaha ity antony ity indrindra
ny tsy fahampian-tsakafo, na dia mbola eo anelanelan'ny 10 fps aza ny mpizara landy (na haingana kokoa noho ny 600). Misy
Fomba maro ahafahana manitsy ny habetsaky ny CPU FS hanokafana ny toerana sy ny tontolon'ny asa. Ny fomba tsotra indrindra dia ny mametraka ny kisarim-pifantohana amin'ny sarany ho an'ny lanjany izay anao
Afaka mahavita manatratra foana ny milina. Ny ambany no hametrahanao ny tsindry, ny fotoana hiasan'ny CPU dia tsy voatery handefasana rakitra. Ny zavatra iray hafa azonao atao dia ny manova ny
following variable ao amin'ny FSX.CFG:
Ny FIBER_FRAME_TIME_FRACTION dia mamaritra ny habetsaky ny fotoana isaky ny frame izay ahafahantsika manao asa fibresina eo amin'ny laharana voalohany. Isika dia mandrefy ny hafatr'io fotoana io mba hametrahana sy hamerenana ary hampitomboana izany fotoana izany amin'ny alalan'ny FIBER_FRAME_TIME_FRACTION mba hamaritana ny faharetan'ny fitarihana ny fibre. Ohatra, raha raisina amin'ny 10 milliseconds ny simulation sy ny famerenana ary ny FIBER_FRAME_TIME_FRACTION dia napetraka amin'ny ambaratongan'ny 0.33, dia avelantsika ny fibarosaka eo amin'ny kofehy maina mba hahazoana hatramin'ny 10 * 0.33 = 3.3 milliseconds. Ho an'ny antotan-tsarin'ny 1.0 sy 2.0, ny fotoana nomena ny fibre dia ny 10 milliseconds sy ny 20 milliseconds, respectively.
[n = 0.01 - 0.99] Ho an'ny Quad core na rafitra tsaratsara kokoa 0.70
Ho an'ireo milina matihanina marobe dia voalaza fa tsy ilaina ny etsy ambony ary izany no antony i 0.33. Niezaka fotsiny aho avy eo ary nahita fa tena nanampy ahy izany. Ny rafitra tsirairay dia tsy mitovy amin'ny fitaovana maoderina sy software. Noho izany dia mila milalao miaraka amin'ny fikandrana izay miezaka tsara indrindra amin'ny rafitra tsirairay ianao. Maro ireo antony mihatra. Maniry aho fa afaka milaza aho fa misy boky iray mifanaraka amin'ny vahaolana rehetra, saingy tsy misy izany. Raha toa ianao ka manana olana amin'ny FPS (frames isan-tsegondra) eo amin'ny rafitra misy anao dieny izao vao manomboka mampifanaraka anao dia manoro hevitra anao aho hamaha io olana io amin'ny voalohany amin'ny fametrahanao gidro ho an'ny faritra iray izay mihazakazan'ny masonao foana ary mitazona azy ireo any. Mijoroa amin'ny masonao ny masonao ary miezaha hihazona 20 fps. Azonao atao ny mametraka ny fps limiter ho an'ny tsy voafetra ary mandamina FSX amin'ny alàlan'ny paikady, ary avereno ao amin'ny 30fps (Halavany ny taham-pahafatesana na ny taham-pandrefesana fandrefesana anao) Raha mieritreritra ianao hoe tezitra be dia be amin'ny famolavolana ordinatera fotsiny ho an'ny simulateur ny lalana tokony haleha. Hahazo tombony amin'ny $$$ ianao amin'ny fananganana rafitrao manokana.
ao amin'ny b] lalana [/ b Ny fizarana dia ireto manaraka ireto:
Miova ho 6.500000 hatramin'ny 7.500000
Ny fametrahana etsy ambony dia mamaritra ny elanelam-potoana FSX mamoaka ny toerana (maranitra) ary miasa miaraka amin'i TIME_FRAME_TIME_FRACTION.
Ny fanovana io tsipika io dia hampitombo ny fifantohana lavitra avy amin'ny fiaramanidina. (Mariho fa hampitombo ihany koa ny fampiasanao VAS kely)
Ao amin'ny fizarana [terrain]
Ataovy azo antoka fa napetraka amin'ny DETAIL_TEXTURE = 1
Ity dia tombontsoa avy hatrany ho an'ny mpisera sary. Hahita soratra masina tsara kokoa ianao amin'ny ahitra eny an-kianja sy ny fanatsarana lehibe eo amin'ny maso ankapobeny amin'ny rivotra mijery.
Fizarana 3: Manampy ny enta-mavesatra amin'ny FSX. Afaka manampy ny sainao bebe kokoa amin'ny fananana ny karatra HD graphics manao ny sasany amin'ny asan'ny CPU.
Ireto misy horonan-tsary mahasoa:
Ny horonantsary manaraka dia avy amin'ny Flight Sim Addict ary mahafantatra hevi-bahoaka maro koa izy. Heveriko fa mpikambana ao amin'ny ekipa REX ihany koa izy.
Mampiasa Megazery sy Blue Sky aho ary betsaka izany. Izany no mahatonga ahy hanana 2 TB HD natokana ho an'ny FSX. Na dia tsy mila manahy momba ny autogen aza aho, dia mety ho sarotra amin'ny lozam-pifamoivoizana ny sarimihetsika sary rehefa tonga amin'ny fahamatorana. Nampiasa ireo teboka etsy ambony aho hanatsara ny fahamendrehana ao 500 ft noho izany dia mahatonga ny fisintohako sy ny fitsangatsanganana ho azo tsapain-tanana kokoa.
Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny sary misy sary tsy misy autogen dia ny fampiasana VAS dia lasa tsaratsara kokoa miaraka amin'ny 10 fps hampitombo ny filazana ny toerana misy anao. Hisy foana ireo mpamita-tsakafo izay mila fotsiny sy betsaka kokoa saingy hisy fihenam-bidy hatrany mba hisorohana ny fianjeran'ny programa mandra-pampana ny sehatra bitika 64. Ny fitantanana hendry sy ny fahatakarana tsara ny masonao dia handeha lavitra mba hahatonga ny FSX ho sehatra mahafinaritra sy azo antoka.
Manantena aho fa manampy anao amin'ny fampisehoana izany ary mahatonga FSX ho an'ny fandaharana maoderina kokoa.